realWW, Umbhali ku-Real Estate Blog - realtyWW:
Umbhali Archives: realWW
Posted on April 6, 2020 by realWW
Kugcine ukubuyekezwa: I-Aprili 6, 2020 14: 07
Posted in Isakhiwo Sezezakhiwo | Umake Benchtop Jointers | Shiya amazwana |
Posted on April 1, 2020 by realWW
Kugcine ukubuyekezwa: I-Aprili 1, 2020 16: 19
TOPON TO SONS TO HIRE AAL ESTATE AGENT
Ukuthenga noma ukuthengisa impahla kuyisinqumo esibaluleke kunazo zonke empilweni yomuntu. Umangele kungani? Yebo, lokhu kufanele ukuthi utshale imali enkulu ngasikhathi sinye. Abathengisi bezindlu nomhlaba bangabachwepheshe abangakusiza ngokuthenga noma ngokuthengisa impahla. Banolwazi oluyilo olusebenzayo mayelana nemakethe yezindlu futhi bayakwazi ukuphatha iqembu eliphikisayo.
Ngoba inqubo yokuthenga nokuthengisa ingaba yinde, iyinkimbinkimbi futhi icasule, ama-real estate agents angabaqeqeshiwe abaqeqeshiwe abangakwazi ukuphatha izinto ezifana ne-pro! Uma usadidekile ngaphambi kokuqasha i-ejenti yendawo ethengisa izindlu nomhlaba ukuze ithengise impahla yakho, nakhu okumele ukwazi.
Ulwazi Olufanele Lobungcweti
Akungabazeki ekwamukeleni iqiniso lokuthi abenzeli bezindawo bangabasebenza kahle, abanolwazi olufanele olusebenzayo mayelana nomkhakha wemakethe yezindlu. Ngokuhambisana nalokho, banamakhono futhi banolwazi kakhulu kulokho abakwenzayo. Hhayi lokhu kuphela, kodwa bangakwazi ukuphatha ngobuningi bawo wonke amaphepha kuwe.
Kuleli zwe lesimanje, lapho kunzima kuwe ukwenza izinqumo zokuthenga nokuthengisa, ama-estate estate angakuchazela wonke amaqiniso ukwenza izinqumo ngokushesha. Lokhu kungenxa yokuthi indlela yabo yokubambisana ibavumela ukuthi bakhonze amakhasimende abo ngolwazi lonke nesipiliyoni abanaso. Uma kwenzeka ufuna impahla kanokusho eduze kwesikhathi sakho Indawo yokuhlala yaseMont Botanik yindawo ekahle ongavakashela kuyo. Iphelele futhi isebenza kahle kakhulu ekuziphatheni okuhle. Futhi ingxenye enhle kunazo zonke, umenzeli wakho wezezindawo uzophatha konke kusuka kumaphepha amaphepha kuya kwesamba sokulungiswa esifanele.
Nge i-agent ye-real estate ngasohlangothini lwakho, akudingeki ukhathazeke ngenqubo yokuthenga noma yokuthenga edla isikhathi. Ama-ejenti aqeqeshiwe kakhulu ukuphatha konke ukusebenza nezinqubo ukukunikeza lula okukhulu. Ukusuka ekufuneni indlu efanelekile kuya ekubhideni inani elifanele, umenzeli uzokwenza konke. Umenzeli wakho wezezakhiwo naye uzophatha zonke izingcingo ezijabulisayo ezivela kubathengi futhi zingenza amadili omhlangano ahambe kahle.
Siza Uthole Umakhelwane Ofanele
Ngenkathi ufuna indlu ephelele, ezungezile noma eyomakhelwane kufanele kube izinto zokuqala okufanele uzicabangele. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi kungani? Kungenxa yokuthi ezungeze indlu yakho kushiya umbono wendlu yakho nezinga lakho lokuphila. Futhi ngumenzeli wempahla kuphela onekhono lokukutholela indlu enomakhelwane abaphelele. Banolwazi olusebenzayo nokufinyelela kuhlu lokugcina kuhlu lwezinto eziseduze nawe. Lokhu kufinyelela smart kulolo lwazi kuvumela ukuthi bahlole isithombe sezezimali sendlu yakho futhi benze izinqumo ezihlakaniphile ngaphambi kokukuvumela ukuthi utshale imali kakhulu.
Isiqondiso Esilungile Ngenkathi Kuboleka Noma iyiphi Intengo
Ukuba ngumxhasi wakho ngenkathi uthenga indlu efanelekile, ama-real estate agents nawo akunika isiqondiso ngaphambi kokukwenza izinqumo mayelana nokutshalwa kwemali. Ngenxa yokuqonda kwabo nolwazi ngemakethe, bangakwazi ukuhlola intengo yezezimali yangempela yendlu yakho. Futhi lolu lwazi lungakusiza ukukala inani elifanelekile lokuqhekeka isivumelwano esifanelekile nomthengi nomthengisi.
Oxhumana Nabo Emakethe Yezindlu
Abathengisi bezezakhiwo banokuxhumana namanethiwekhi emakethe okunika amandla okubheka emakethe yezindlu. Ngaphandle kwalokho, akekho umthengisi ongaqonda izimo zakamuva zemakethe noma ukuguquguquka kwentengo njenge-ejenti yesazi. Bangochwepheshe ekuqondeni isimo semakethe yempahla.
Uma uzizwa sengathi ukuxoxisana nomthengisi ophikisanayo kuyinqubo yokungasebenzi, bese uyishiya kochwepheshe. Ama-ejenti wempahla aqeqeshwa kakhulu ukuxoxisana futhi akusize uzinze ngentengo enhle kakhulu. Banolwazi ekusingatheni izindaba ngobuhlakani kuwe.
Phatha Yonke Imibhalo
Inqubo yokuthenga nokuthengisa ifaka amaphepha amade nokuthengiselana okungakudonsa kanzima ukuba ukwazi ukukuphatha. Kungakho kufanele uqashe i-ejenti yempahla yobungcweti engaphatha wonke amaphepha nezincwadi ukwenza inqubo ibe lula kuwe.
Yenza okwenziwe ngeSwift
Yekani ukukhathazeka ngokuthengiselana enikwenzela indlu. Noma ngabe ukhokha inani elihleliwe noma ukufakwa kwesembozo, ama-ejenti wempahla yezindlu azokwenza inqubo ibelula ekuqhubekeni nokwenziwayo okuzayo. Konke okudingeka ukwenze ukubonana nochwepheshe ochwepheshe bese uvumela umenzeli abhekane nakho konke ngenkathi uncika futhi uphumule.
Njengomuntu, uma ukhathazeka ngenqubo yokuthenga nokuthengisa eqeda amandla, kufanele ushiye ingcindezi yakho kubathengisi bezindlu abathengiswayo abaqeqeshiwe ngokuphatha ukuphatha zonke izinto zakho.
Posted in Imali Yezindlu, Ukuthengisa Izakhiwo Nezindawo | Umake Umenzeli Wezentengiso | Shiya amazwana |
Posted on Mashi 18, 2020 by realWW
Kugcine ukubuyekezwa: UMar 18, 2020 20: 19
Izinyathelo eziyi-8 Zokuthengisa Ikhaya Lakho
Uma usukulungele ukuthengisa indlu yakho kepha ungakaze udlule kule nqubo, ungaqiniseka ukuthi uzoqala ngaphi - lezi zinyathelo eziyisishiyagalombili zizosiza ekuphumeleleni impumelelo.
Thola Ukuthi Ingakanani Ikhaya Lakho Elifanele
Isinyathelo sokuqala ukubuza, “Yimalini indlu yami?? ” Uma impendulo ingeyona into obufisa ukuyenza, yenza ongakwenza ukukhulisa inani ngokwenza ngcono. Uma isabelomali sakho siqinile, okungenani sicabangele ukulungisa kabusha, ubuhle bekhompiyutha yakho, ususe imfuhlumfuhlu futhi uyihlanze ngokuphelele.
Nquma isikhathi Esingcono Sokuthengisa
Uma ufuna imiphumela emihle kakhulu, ungahle ungafuni ukubeka ikhaya lakho ukuze lithengiswe ngesikhathi sasebusika. Izinyanga zasehlobo zibona ukuthengiswa kwasekhaya kakhulu, noma kunini phakathi kuka-Ephreli no-Okthoba kungakusiza ukukhulisa inzuzo.
Thola Umenzeli Omuhle Wezindlu
Ukuba ne-realtor enokuhlangenwe nakho eceleni kwakho kungenye yezingxenye ezibucayi kakhulu zenqubo yokuthengisa ekhaya. Uma kungenzeka, thola okudluliselwa kubangane, izihlobo, omakhelwane noma osebenza nabo. Cwaninga okungenani ezintathu ukuthola ukuthi yini i-rapport futhi ubuze imibuzo efana nokuthi isu le-ejenti lizoba yini. Kufanele abe nesipiliyoni sokuthengisa amakhaya endaweni yangakini uma kungenzeka. Uzofuna nokuthola ukuthi izinga lekhomishini kuzodingeka likhokhele izinsizakalo ezishiwoyo. Ngenkathi ungaya i-FBSO (Kuthengiswa Ngumnikazi), ku amacala amaningi uzogcina usuthole imali encane yekhaya lakho ekugcineni kunokuqasha i-ejenti ukhokhe imali yekhomishini.
Yenza Ukulungiswa Okudingayo
Bheka ikhaya lakho, ngaphakathi nangaphandle, ngamehlo aqaphelayo omthengi ongase akhombe ukuthola noma yiziphi izinkinga ezingaba khona. Uthola kuphela ithuba elilodwa lokwenza umbono wokuqala omuhle ngakho-ke qiniseka ukwenza konke ukulungisa okudingayo kuqala. Noma yini enkulu izobuyela ukukushaqisa ngesikhathi sokuhlolwa.
Ufuna ikhaya lakho libukeke lihamba phambili, hhayi abathengi kuphela kodwa nezithombe. Inikeze ukuhlanza okujulile noma ukuqasha insizakalo yokuhlanza - konke kufanele kukhanye. Lokho kusho ukuthi phansi, amakhaphethi, izindonga, konke. Ingaphakathi kufanele likhanyiswe kahle, uma kunesidingo, engeza izibani futhi uqiniseke ukuthi ukugcina izimpumputhe zivulekile ukuletha ukukhanya kwemvelo. Ukwehlisa wonke amakamelo (kufaka phakathi amakamelo) kuzowenza ubukeke uhlanzekile futhi ubanzi kakhulu.
Uma ucabanga ukuthi uqashe i-ejenti enekhono, lowo muntu uzohlonza amaphuzu athengisayo aphezulu ekhaya lakho bese ukhetha indlela enhle kakhulu yokuzikhangisa. Hlangana ne-ejenti yakho ukusiza nokuvumela umkhankaso - phela, ubesehlala ekhaya, ngakho-ke uyazi kangcono kunanoma ngubani. Izithombe zobungcweti kufanele zithathwe okungenani - ukuvakasha okubonakalayo kungaletha abathengi abangaphezulu kakhulu.
Enye yezinto eziyinselele kakhulu ekuthengisweni kwasekhaya ukukhombisa ikhaya. Uma uphoqa i-ejenti yakho ukuthi yenze aphoyintimenti, uzoba nabathengi abambalwa abangena ngomnyango. Kungahle uzame futhi uguquguquke ngangokunokwenzeka noma vumela umenzeli afake ilokhi yekhiphedi noma ibhokisi lokukhiya ukuze ulikhombise ngenkathi ukude. Lapho uthola indawo yokuhlala okuningi, kungcono.
Xoxa noma wemukele Ukunikezwa
Lapho uthola okunikezwayo, wena ne-ejenti yakho unganquma ukwamukela noma ukuxoxisana kusuka lapho. Uma ikhaya lakho lithekile, ungathola izipesheli eziningi, kepha unganaki noma ikuphi kuzo, noma zibonakala ziphansi. Imvamisa abathengi baqala phansi kodwa bazimisele ukuxoxisana. Uma nje wonke umuntu esivumile inqubo yokuthengisa ingaqedwa. Ekugcineni, kuzosayinwa amaphepha okugcina, uzothola isheke bese umthengi ezothola izinkinobho.
Posted in Ukuthengisa Izakhiwo Nezindawo | Umake ukuthengisa ikhaya lakho | Shiya amazwana |
Posted on Mashi 16, 2020 by Jack
Kugcine ukubuyekezwa: UMar 16, 2020 08: 58
Ukuthengisa Indlu Yakho ngemali Eningi: Okufanele Ukwazi
Imakethe ngayinye yezindawo zokuhlala inezifiso zayo. Labo obaqonda kahle bangathengisa kalula impahla ngemali enkulu kakhulu. Imvamisa, ochwepheshe embonini bayiqonda ngokugcwele le nkambiso futhi bangabantu abakhulu ukukusiza emizamweni yakho yokuthengisa indlu.
Konke, ungathengisa ikhaya lakho ngemali ephezulu uma unemininingwane efanele yokwenza kanjalo. Le ndatshana izogxila kumathiphu azokusiza ukuthi uthengise impahla ngemali ethe xaxa. Qhubeka ufunde kabanzi. Qhubeka ukufunda →
Posted in Ukuthengisa Izakhiwo Nezindawo | Umake Ukuthengisa izindlu, Ama-estate agents, I-Real Estate Market, Thengisa Indlu, thengisa impahla yakho | Shiya amazwana |
Posted on Mashi 5, 2020 by realWW
Kugcine ukubuyekezwa: UMar 5, 2020 13: 29
Izinzuzo Zokuqasha vs Ukuba Nekhaya
IMeta:Akukaze kube lula ukunquma ukuthi uzoqasha indlu yakho yini. Imvamisa iza nokubonisana nokuzindla okuningi ngoba ubengeke uthande ukuzisola ngesinqumo sakho ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zokuxazulula isimo. Cabanga ngalezi zinto ezilandelayo ukukusiza uthathe isinqumo.
Eminyakeni embalwa edlule, bekuyinzuzo ngomqondo wokusebenzisa kahle izindleko ukuba nendlu ngokungafani nokuqasha. Emuva ngo-2018, kodwa-ke, ezinye izinguquko ezinkulu zentela zilethe imishado phakathi kwalaba bobabili basondele ndawonye.
isithombe / emhlophe-bubble-example-1111372 /
Njengokunquma kokuhle ukuphepha okuphathekayo ukuvikela izinto zakho eziyigugu kakhulu, cabanga ngokulandelayo ukuvikela isinqumo sakho sokuqasha vs indlu yakho.
Njengamanje Ukuma Ukuqasha Indlu Yakhe
imifanekiso / okhiye-bezandla-ezakhe-ethengile-ekhaya-1317389 /
Sithini isimo sakho sezezimali okwamanje? Ingabe usemsebenzini ophephile noma kumane kuwumsebenzi wesikhashana? Ingabe awukashadi, noma unomndeni; Ukulungisa noma njalo ohambweni? Uyini umgomo wakho wesikhathi eside? Thola umuntu ohlela ukuhlelwa kwezezimali noma umthengisi wezezakhiwo othembekile ukuze akuphendule kahle.
I-The Factor Yezindleko
Sitshele, kushibhile yini ukuqasha noma ukuba nendlu? Okokuqala, amandla emakethe atshintshe kakhulu ngemuva kwe umthetho wentela uyashintsha zenziwe zabuya ngonyaka ka-2018. Ngenkathi kungabonakala uhlelo oluhle lwezezimali ukuthenga indlu yakho, ungagcina ukhokha ngaphezulu ngokuhamba kwesikhathi. Akusho ukuthi ukuqasha akuhambi nezindleko nezindleko ezihambisana nakho ngoba izindleko zentela nazo zingase zivele njalo ngonyaka.
Ngaphandle kwezintela, izinkokhelo zenzalo, nezimali ezihambisana nobuninikhaya, kuzodingeka wenze ukulungiswa okungahleliwe ongeke ukubone kuza. Udinga futhi ukufaka isandla ezindlekweni zefenisha entsha, okokusebenza kanye nokuthuthuka kanye nezinye izinsiza nezindleko zomshuwalense ezivame ukumbozwa kuzinkokhelo zerenti. Cabanga usebenzisa umshini wokubala wempahla onayo ukuthola lezo zindleko ezengeziwe.
Cabanga ngalezi zinzuzo ezilandelayo ozozuza kuzo uma ukhetha ukuqasha njengenketho yakho yamanje:
Isizathu Sokuthi Kufanele Uqashele Ukuqasha Ezindlini Zezakho
Ukunakekelwa nokulungiswa kwemisebenzi kususwa kumninindlu.
Incishiswe amaphepha enamacala ambalwa ngaphambili.
Ithuba lesilinganiso esihle sesikweletu uma umnikazi womhlaba enza imibiko kuma-bureaus wesikweletu (qiniseka ukuthi uthola).
Izikweletu zentela yempahla ye-Zero futhi futhi ngeke ukhukhumele ngamanani okuwa ekhaya.
Lokhu akusho ukuthi indlu yokuqashisa ukuba ngumnikazi wayo ayizukuza nama-Downside. Lokhu kufaka phakathi:
Izinzuzo zentela ye-Zero, futhi futhi wehluleka ukwakha ukulingana.
Izikhala zinganciphisa izinketho zakho.
Impahla ingathengiswa ngesikhathi somninimzi noma akhuphule irenti, okungakuphazamisa kakhulu.
Isinqumo ekupheleni kosuku konke kubuyela ezithandweni zakho. Lapho uzizwa unqunywe ngokuphelele, kuyilapho kuphela lapho ungaba sesimweni sokuthatha isinqumo esinolwazi? Ngabe i-athikili engenhla isizile ekudambiseni umthwalo wakho ngokuqashwa kwendlu yakho? Yabelana esigabeni sokuphawula ngezansi.
Kay Burton kuyinto realtor ezisebenzayo emashumini amabili eminyaka adlule. Akazibonanga nje kuphela izinguquko ezihlukene embonini yezindlu ezithengiswayo ngezikhathi ezahlukahlukene kodwa uphinde waveza nencwadi ethengiswa kakhulu ngabaninimizi. Unikeza ukuqonda okwengeziwe kubhulogi lakhe maqondana nanoma yini ephathelene nokuthengiswa kwezakhiwo.
Posted in Imali Yezindlu | Umake Ukuqasha vs Ubunikazi | Shiya amazwana |
Posted on February 24, 2020 by realWW
Kugcine ukubuyekezwa: Feb 24, 2020 17: 22
Izeluleko ezi-5 ezibalulekile zokuLungiswa ukuze ungene ePhilishini
Wonke umuntu ohlala efulethini uhlangabezana nezinselelo zokuphila emhlabeni wesakhiwo somunye umuntu. Uma ungakaze uhlale endaweni efulethi kunezinto ezithile ongeke uzilindele. Amanzi kwesinye isikhathi abamba ukubanda eshawini? Imeyili ayithunyelwa ngqo emnyango wakho? Imibuzo ongakaze uzibuze yona ngaphambili ingaphakama. Lapho wazi okwengeziwe ukuthi yini ongayilindela inguquko elula ozoba nayo. Yiba nalezi zeluleko ezilandelayo engqondweni ngaphambi kokugxumela efulethini lakho elilandelayo.
Ithiphu 1: Yakha ubudlelwano obunempilo ne-Landlord yakho
Ukuphila ngempahla yomunye umuntu kuza nemisebenzi yakhe. Awukwazi ukupenda izindonga noma yimuphi umbala okhanyayo owufisayo, i-lawn yakho kufanele ibukeke ihlanzekile futhi igcinwe futhi ungeke ukwazi ukuba nezilwane ezifuywayo. Noma ngabe yisiphi isimo ongase uzithole ukuso, into eyodwa iqinisekile, ubudlelwane bomqashisi ophile kahle bubalulekile esimweni sokuhlala ntofontofo.
Qiniseka ukuthi ukhokha irenti yakho ngesikhathi futhi ugcina uphilile isilinganiso sengeniso ukwakha ukuthembeka kwakho. Lokhu kuzokhulisa ukuthembana ebudlelwaneni bakho futhi kukuthathe njengokwethenjwa ngokwezezimali. Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi sobala. Uma uthembekile kumnini-khaya wakho ngokuba ngumnikazi wenja noma ukuba nomuntu ongezekile azohlala nawe, ngeke ibe khona indawo yokungezwani. Uma uqala ukufihla izinto isimo siba lusizi futhi ngokushesha ungawa useningizimu. Okubaluleke kakhulu, qiniseka ukuthi uthola konke ngokubhala. Uma unezinkinga, udinga usizo lokulungiswa, noma udinga ukuxhumana kuphephile kakhulu ukuthumela i-imeyili ukugcina irisidi ingxoxo.
Ithiphu 2: Gcina Amandla
Ukukhokha izindleko izindleko kungenzeka kakhulu lapho uhlala efulethini. Kuyisikhathi esingajwayelekile lapho irenti yakho ihlanganisa izindleko zakho zokusiza nezinye izinsiza. Ukwehlisa imali ekhokhayo njalo ngenyanga, uhlale wazi ukusebenzisa kwakho amandla. Thatha izinyathelo zokusiza iplanethi yakho kuphela kepha futhi usize isikhwama sakho semali.
Qala ngokushintsha izibani efulethini lakho. Uma isikhala sakho singafiki kakade ngamalambu wokukhanya anamandla asebenza kahle uthenge amanye ukuze unciphise kakhulu imali oyikhokhayo. Le yindlela elula yokuvimba inkinga ebizayo ukuthi ingakhuli. Uzofuna futhi ukukhipha i-elekthronikhi uma ingasasetshenziswanga ekusebenziseni amandla nokuba yilomthwalo wamandla we- “phantom”. Ngaphezu kwalokho, zama ukunciphisa isikhathi sakho sokugeza ukuze unciphise imali yakho ekhokhwayo. Qhubeka ufune izindlela ezintsha zokunciphisa umkhawulo ukusetshenziswa kwakho njengoba izinto ezincane zivame ukwengeza okusheshayo lapho uhlala eflethini.
Lapho uqala ukungena endaweni yakho kungahle kube nzima ukuwenza uzizwe sengathi kusekhaya. Ukusabalalisa imali yakho kuzowenza ekhaya futhi ukhululekile ukuqeda usuku lwakho. Cabanga ngohlu lwezinto ezibalulekile ongathanda ukutshala kuzo. Mhlawumbe usofa onethezekile ubalulekile kuwe noma umugqa omuhle ofudumele uphezulu ohlwini lwakho lwezinto eziza kuqala. Cabanga konke okudingayo ukuze wenze ifulethi libe yikhaya lakho lesikhala esikhethekile.
Sebenzisa amalambu, amakhandlela, noma isibani sokukhanyisa ukusetha ithoni egumbini lakho lokuphumula. Ukukhanyiswa kungenza umthelela onamandla endaweni esejwayelekile. Hlela ubuciko obuthile futhi ubonise ezinye izithombe zomndeni nabangane ukwenza ngezifiso indawo yakho yokuhlala enkulu. Ekamelweni lokulala, phenya umugqa opholile futhi ubonise ezinye zezinhlaka eshalofini lakho. Lezi zindawo ezimbili zizodinga ukunakwa kakhulu njengoba uzohlala kuzo. Ukulungiselela isikhala efulethini lakho kungabonakala kungabalulekile ekuqaleni kodwa ukufika ekhaya endaweni engazizwa uhlukile kuwe akuyona umuzwa ofanele kakhulu ngemuva kosuku olude.
Icebiso 4: Tshala Ngokugcina
Ukuqasha ifulethi kusho isikhala esincane! Kuyabonakala kusukela ekuqaleni ukuthi ngeke ukhululeke kakhulu ukuba ungcolile noma unganaki ngezinto zakho uma singekho isikhala esanele sokuvumela kanjalo. Nikeza le ndaba i-oda ethile bese ubeka imali yakho ekugcineni okuthile kwengqondo. Izinto zokucasha azilungisi inkinga, zibhekane ngqo nohambo oluya esitolo sakho sendawo.
Uzofuna ukuqala ngezihlalo ezithile ezonakalayo. Lokhu kungahle kubonakale kuyinto encane ekuqaleni kodwa, ashibhile futhi akuvumela ukuthi ugcine izihlalo ezindaweni ezincane. Ungatshala imali kwezinye ezinhle, kodwa lezi zikunikeza umbono wokuthi kungakanani isikhala osebenzisana nakho nokuthi ufuna indawo yakho ibukeke injani. Faka amashalofu yonke indawo. I-Shelving ingaba ngumngane wakho omkhulu uma unezincwadi eziningi, ama-knickknacks, noma izinto ezincane. Inombolo enhle yamashalofu izonikeza izinto zakho ezincane indawo ebekiwe nendawo enhle yokubonisa. Thola izindlela ezisebenzayo zokuhlela izingubo zakho. Ngemuva kwesibambo sezicucu emnyango kungaphindeka kabili njengesikhala ukubeka amasokisi akho, izikipa, kanye nokugcwala okuxubile.
Icebiso lesi-5: Qeqesha isilwane sakho
Uma ungumnikazi wesilwane esisendlini, cishe yindlu ephukile futhi eqeqeshelwe ukuvuthwa okuthile. Kodwa-ke, uma usuka endlini negceke isilwane sakho singaba nesikhathi esinzima sokudumisa empilweni ngaphakathi. Ifulethi alinayo indawo enkulu yomngane wakho omkhulu we-fluffy ngakho-ke kuzodingeka uguqukele ekuqeqeshweni okufanele. Hlanganisa izinsiza ezivela kubangani nomndeni onezilwane ezifuywayo zasendlini. Cela ukuthola izeluleko noma izinkomba kubaqeqeshi abaziwayo.
Indlu ephula isilwane sakho ibaluleke kakhulu lapho uhlala efulethini, ufuna ukugwema noma yiziphi ibala elibonakalayo kumakhaphethi ngangokunokwenzeka. Uma isilwane sakho siyizwi kakhulu futhi sivame ukukhonkotha noma ukwenza umsindo kaningi, ukuba nomqeqeshi noma ikhamera kuyodingeka lapho ungekho ekhaya ukuze usithule. Amanye amafulethi anemithetho eqinile yezilwane ezinambitheki engahluka kusuka kokuhlungo kuye kokuxoshwa. Ngaphezu kwalokho, ukuthatha isilwanyana sakho ngangokunokwenzeka kuzodingeka uma unesilwane esikhudlwana esidinga isikhala. Lokhu kuzosiza ukukhishwa kwamandla okusebenza futhi kuvikele noma imuphi ifenisha yakho ukuba idilizwe noma izindonga zingcoliswe.
Ukuhlala efulethini yilona ushintsho lomuntu ongazange abhekane nalesi simo sokuphila esiyingqayizivele. Ungaphansi kwemithetho yomqashi wakho noma umphathi wempahla futhi manje kufanele uziphathe ngokusemandleni akho ukuze uphile endaweni yakho entsha. Khumbula lezi zeluleko ukwenza inguquko yakho ibe lula uma uhlanganisa isikhala sakho esisha.
Posted in Home Improvement | Umake Ifulethini | Shiya amazwana |
Posted on February 22, 2020 by realWW
Kugcine ukubuyekezwa: Feb 22, 2020 21: 04
5 Amathrendi Wokwakha Okungaphakathi Othandwayo We-2020
Yiziphi izindlela zangaphakathi zokuklama ezizobusa ngo-2020? Ngabe imvelo izoba yisizinda sokuheha? I-2020 ingahle ibone izinguquko eziningi embonini yezokwakha, futhi ukwakheka kwengaphakathi akuyona into eyehlukile. Izimo eziningi ezintsha ziseduze.
Unganikeza ukubukeka okusha kwendlu yakho yangaphakathi ngaphandle kokuchitha okuningi. Lesi yisikhathi esifanele sokwenza ukuthuthuka okuthile ukuvela esixukwini.
Akunakusho ukuthi, abaningi izitayela ezintsha zokuklama ingaphakathi kuzongena esikhundleni sezitayela zangaphambilini. Sinciphise ukukhetha phansi emiklamo emihlanu edumile. Yiba nokubheka bese unquma ukuthi iziphi izitayela ezizolingana neminye imidwebo yendlu yakho yangaphakathi.
Kodwa ungazibekeli umkhawulo ngaphakathi kwale miklamo kuphela. Kuzofanele uhlole ukuthola eminye imiklamo eminingi ehlaba umxhwele.
Imvelo Endlini Yakho Yokuphila
Izitayela zokuklama ingaphakathi kuzoba yi-nature-centric ngo-2020. Ukunethezeka kobumba kuzohlanganiswa nezinto eziningi zemvelo nezinto ezifudumele. Uma nithanda imidwebo enobungani bemvelo, ungahlola izinto eziningi ezintsha ukuze unikeze ukubukeka okudala nokukhuthazayo ngaphakathi kwendlu yakho.
Izinkuni zemvelo zizoba ukwengeza okuhle. Ungayihlanganisa nezinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezenziwe ngamatshe ezifana negranite, amatshe amatshe, kanye nemabula. Konke lokhu kuzohambisana futhi kufane nezinto zemvelo. Uma kungakhoneka, cabanga ukusebenzisa ifenisha esetshenzisiwe futhi eyenziwe ngesandla ukuyenza ibe ngcono kakhulu.
Isikhungo sokucisha umlilo
Isikhungo sokucima umlilo anganikeza ukuthinta kwanamuhla ekhaya lakho lakudala. Cabanga nje, uzoba nezinto eziningi zemvelo ekhaya lakho, futhi kuzoba nendawo yomlilo esikhungweni. Uzokuthanda ukubukeka futhi uzizwe. Ungajabulela umlilo ngobusuku basebusika ngenkathi uzungezwe izinto eziningi zemvelo.
Lokhu okungeziwe kungaba okuhle kakhulu ukujabulela isikhala sakho ezimweni zezulu eziphikisayo. Onke amalungu omndeni wakho azowuthanda lo mkhuba wangaphakathi wokuklama. Futhi, izindawo zokucima umlilo zizonikeza umuzwa othokomele endaweni yakho yokuhlala.
Ungasebenzisa noma yiziphi izinto zakho ozithandayo, kufaka phakathi isitini, itshe, noma ifekisi, ukwenza indawo yakho yomlilo. Kungaba iphuzu eligxile egumbini lakho lokuphumula noma ehholo. Ungangeza i-ins-ins noma isikejana somkhumbi ezizungeze indawo yakho yomlilo ukuze ubuke ngokuphelele. Lezi zinto zizohambisana.
Izibani Zamanje Zodonga
Uma kukhulunywa ngokukhanyisa, ungakhetha izitayela ze-sconce ezifiselekayo. Lo mklamo uyahlaba umxhwele futhi ngeke uthathe isikhala esiningi. Ungangeza lesi sici endaweni engaphansi kwethebhulethi.
Lezi sconces zanamuhla kanye namalambu odonga kuza ne-sleek matte Finishing. Lezi zitholakala ezingalweni ze-swing oversized ukunikeza ukubukeka okungafani nengaphakathi lakho. Uma kukhethwe kahle, lezi zibani eziklanywe ngokuhlukile zinganikeza ukubukeka okuhle kwendlu yakho yangaphakathi.
Okumnyama kuzohlala kungenye yezindlela ezithandwayo zangaphakathi zokwakheka kwaphakade. Abaningi bethu ngeke bahambisane nobumnyama. Ngisho nabaqambi bezangaphakathi abanolwazi bazama okumnyama ukuthola okuthile okusha nokudala kusuka kuhele elidala elimnyama.
Ifenisha emnyama, ukulungiswa, izindonga, kanye nokuqedwa okumnyama kuzoya thatha imboni yezokwakha ingaphakathi. Uma uhlela ukufaka okuthile okumnyama, ngakho-ke awudingi ukucabanga futhi. Vele uqiniseke ukuthi ukwakheka kuyisitayela futhi kufanelana nokunye ukucushwa kwekhaya lakho.
Uma ufuna ezinye izitayela ezintsha ezimnyama, ungacabanga ngezindonga ezimnyama. Yebo, izindonga ezimnyama zingaba isitatimende sesitayela ngenkathi zinikeza ukubukeka okunamandla nokuhlaba umxhwele. Uma ungathandi abamnyama kuphela, ungahlanganisa ngemibala elula. Imibala ehlukile ingakhulisa ukubukeka nobuhle besikhala sakho.
Ama-accents aluhlaza anjengemibala yomhlaba nezesekeli kuzoba ngenye yezindlela ezithandwayo zangaphakathi zokuklama ngo-2020. Lezi futhi bekuyizitayela zokuqamba ezaziwa kakhulu ngo-2019. Umkhuba ofanayo uzoqina kulo nyaka. Ungasebenzisa izaphulelo kanye nezitshalo zokuhlobisa ukuze ungeze i-greenery ekhaya lakho.
Ungazama noma yikuphi ukwakhiwa kwalezi zingaphakathi noma eziningi. Khetha izitayela zokuklama ezibonisa ubuntu bakho futhi unikeze ukuthinta okuqondile nokwesimanje ekwakhiweni kwakho kwangaphakathi.
Posted in Home Improvement | Umake Interior Design | Shiya amazwana |
Posted on February 21, 2020 by ULuka Hancock
Kugcine ukubuyekezwa: Feb 21, 2020 17: 21
Yikuphi ongakhetha kukho okungcono kakhulu kokulahlwa kukadoti wephrojekthi yokulungisa ikhaya?
Ukuqala iphrojekthi entsha yokulungisa ikhaya kungaba yisikhathi esijabulisayo, kodwa futhi kungakugcwalisa ngokukhathazeka. Kunezinto eziningi okufanele uzicabangele njengezabelomali eziphelele zephrojekthi yakho nokuthi yimaphi amathuluzi nezinsizakalo ozodinga. Kuzofanela futhi ucabange ukuthi uzokwenzanjani ngayo yonke imfucuza eyenziwe kuphrojekthi yakho. Nazi izinketho ezinhle kakhulu zokulahla imfucuza yephrojekthi yokulungiswa kwasekhaya ngo-2020.
I-Pickup yakho nesikhathi sakho
Ngephrojekthi encane, abaninikhaya abaningi bazomane bakhethe ukuthatha uhambo lokuzigcwalisa ngokwabo ngeloli labo lokugibela noma kwelinye abebeliboleke kwilunga lomndeni noma kumngani. Lokhu kungabonakala njengomqondo olula kakhulu, kepha kungaba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe uma kufanele wenze ama-run amaningi agijima.
Kuthatha isikhathi futhi kuyisidina futhi kungonakalisa impelasonto yakho uma kufanele wenze okuningi. Ngaphandle kokuthi ungalingana nayo yonke imfucuza yakho kusuka kuphrojekthi yakho kumthwalo owodwa futhi ukuthathwa komhlaba kuseduze nekhaya lakho, asincomi le nketho.
Uma ufuna ukusebenza ngephrojekthi ngesikhathi sakho nangejubane elikufanele, ukuqasha i-dumpster kungenzeka kube inketho yakho enhle. Kungumqondo okhangayo futhi owodwa odinga inani elincane lomsebenzi owenziwe nguwe.
Inkampani iletha i-dumpster emgodini wakho wokuhamba, uyigcwalisa ngaphandle kokushiya impahla yakho futhi bayithatha lapho igcwele. Okuthusa abantu abaningi kude nale ndlela ukuthi bacabanga ukuthi kuzobiza kakhulu. Uma kuqhathaniswa nokuqasha inkampani yokususa okungenamsoco empeleni akunjalo. Uma udinga ukuba nenkampani yokususa okungenamsoco yenza ukugijimela okuningi ekugcwaliseni izindleko izindleko zingangeza ngokushesha.
Ukuqashwa kwe-dumpster kweviki elilodwa noma ukuqhuma kweqa kunezindleko ezahlukahlukene, kuya ngokuthi ukuphi. Inani lentengo le nsiza lizohluka ngokuya ngokuthi uhlala kuliphi emhlabeni. Ukuqasha i-dumpster e-Elgin Illinois kuzokubiza ngokwehlukile kunalokho uma uqasha eqa e-Brighton England. Intengo yokuqashwa kwakho konke kuncike ekutheni kubiza malini ukuqeda imfucuza ekulahlekelweni kwendlu yangakini noma esiteshini sokuhambisa. Kepha, uma ucabanga ukuthi uzoba nemfucuza eningi kusuka kunketho yakho yokulungisa ikhaya empeleni iyindlela ebiza kakhulu futhi elula kunazo zonke ephikisana nokuqasha inkampani yokususa okungenamsoco.
Inkampani Eyisusa Ukudla
Enye inketho ethandwayo yabanini bezindlu abafuna ukukhipha imfucuza noma i-junk kusuka ekuhlanzeni kwentwasahlobo noma iphrojekthi yokulungisa ikhaya ukuqasha inkampani yokususa okungenamsoco. Kunezindlela eziningi ezahlukahlukene uma ngabe le yindlela oyikhethayo, kufaka phakathi izinkampani ezinkulu nokusebenza kwendoda eyodwa ongabheka kuma-akhawunti wakho wezindaba zokuxhumana. Lezi zinkampani zizikhangisa njengenketho eshibhile yokususa okungenamsoco, kepha izindleko zazo zingacatshangelwa uma uzidinga ukuthi zenze uhambo olungaphezulu koku-1 oluya ekuchithelweni komhlaba.
Kusezingeni elihle ngamaphrojekthi amancane, kepha awasebenzi ngempela kumakhulu. Vele, bazokwenza okukhulu ukuphakamisela kanzima futhi lokho ukucabanga okubalulekile. Uma kukhona noma yikuphi ukulinganiselwa ngokomzimba okukuvimbela ekwenzeni umsebenzi ngokwakho, izinkampani zokususa okungenamsoco kungaba ukukhetha okuhle yize uzodinga ukuhlela uhlelo lwakho nezakho okungaba nzima. Kubantu abaphilile, kunezindlela ezingcono.
Izinketho zakho zilinganiselwe uma kuziwa ekulahleni imfucumfucu yakho yokuvuselela izindlu. Nini ngokuqhathanisa izinketho zakho, indlela ngayinye inezinzuzo nezinzuzo zayo futhi unqume ukuthi yikuphi okuhle kakhulu kuphrojekthi yakho, kufanele uthole ukuthi ziyini izidingo zakho. Uma ufuna inketho engabizi kunazo zonke, uzohamba izikhathi eziningana ukuya ekugcwalisweni komhlaba kwasendaweni. Uma ungafuni noma yimuphi umsebenzi wabasebenzi ohilelekile, uzokhetha inkampani yokususa okungenamsoco. Uma unemfucumfucu eningi kepha ufuna indlela esebenza kahle, uzokhetha ukuqasha i-dumpster noma weqe ukuqasha
Posted in Home Improvement | Umake Ukuqasha i-Dumpster, ukususwa okungenamsoco, ukulahlwa kwemfucuza | Shiya amazwana |
Posted on February 6, 2020 by UDan Hamilton
Kugcine ukubuyekezwa: Feb 6, 2020 21: 29
Izinhlobo Zokufudumeza Kwesikhashana: Yikuphi okuhamba phambili kumakhasi wokwakha?
Kunezinhlobo eziningi ezahlukene zokushisa kwesikhashana ezitholakalayo esakhiweni sakho sokwakha, kuya ngeyakho ukushisa kwangaphandle izidingo. Ukuthi ukhetha a ukuqondisa, ukungaqondile, or i-heater yesikhashana kagesi, uhlobo ngalunye lunezinzuzo ezahlukahlukene nokusetshenziswa.
Kungani Should You Use a Tokwasebukhosini Hodla?
Ukuphumaside i-heater yesikhashana Ukuqashwa ingagcina ibhizinisi lakho ligijima futhi nabasebenzi bakho baphephile emazingeni okushisa ebusika ebusika. Kunezinto ezimbili ezibalulekile okufanele zikhunjulwe. Okokuqala, yi-heater yethu yokwakha kufanele inikeze ukulawula okuthembekile kokushisa kanye nokusatshalaliswa kokushisa ngezikhala ezinkulu zangaphandle. Okwesibili, yufuna ukuqinisekisa ukuthi i-heater ithembele ku umoya omusha. Lokhu ukusika emuva on i-carbon monoxide nezinto ezingcolisa umoya ezingakha nabashisi abathembela on ukujikelezwa komoya ngaphakathi
Yiziphi Duma Bphakathi Dngiqondile, Ingiqondile, futhi Ei-lectric Cukwakhiwa Habadli?
Izishisa zesikhashana zingasebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene zamafutha. Kubalulekile ukuqonda izinzuzo ezahlukahlukene nokusetshenziswa kohlobo ngalunye. Nazi izinhlobo ezintathu ezivame kakhulu ze-heater yangaphandles.
oqondile heaters zithandwa kakhulu. Ni-atural igesi heaters kwesinye isikhathi kuyisinqumo esihle ngoba ukutholakala kukawoyela kuhlala njalo futhi kungabizi. Pi-ropane igesi ama-hetera ahlukahlukene ezimweni zeselula, ukufudumeza kuze kufike ku-500,000 cubicinyawo. I-Liquid ama-propane ukwakhiwa angashisa izikhala afinyelela ku-2.5 million cubic tsoka. Ukulindisa izindleko, khetha i-heater leyo ayidingi i-vaporizer.
Akuqondile heaterukusetshenziswa umusi noma isiphuzo esishisayor kuya ukunciphisa izindleko zikaphethiloli ngenkathi ukugcina amandla okushisa izikhala ezinkulu.
A i-heater yokwakha kagesi ephathekayo kungenye indlela enganciki kugesi noma ku-propane.
Njengomholi wezimboni, sisebenza ngokukhethekile ukuqasha ngokwezifiso i-heater yesikhashana yesiza sakho sokwakha. Ukuze ufunde kabanzi ngezisombululo zethu zokushisa zokushisa zesikhashana,xhumana nathi manje kwesilinganiso esenziwe umuntu.
Posted in Home Improvement | Umake Ukuqashwa kwesikhashana | Shiya amazwana |
Posted on February 6, 2020 by ULuka Hancock
Kugcine ukubuyekezwa: Feb 6, 2020 08: 48
Izinto ezi-5 Ongazicabanga Uma Uqasha i-Dumpster (ukuze ungagcini ngaleyo ndoda)
Lapho senza izinto okokuqala, siba namandla, siphelelwa ngamazwi ngoba asazi ukuthi sithini futhi izinto zivame ukungaxaka futhi zihleleke. Njengokuthi uma u-oda endaweni yokudlela entsha… Uyazi ngempela ukuthi ufunani? Uyazi ngempela ukuthi ungasibiza kanjani leso sidlo? Uqinisekile ukuthi uzokuthanda?
Sifuna ukuqiniseka ukuthi isikhathi sakho sokuqala lapho uqasha i-dumpster ngeke kufane noku-oda endaweni yokudlela entsha. Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uyazi ukuthi ufunani, uzothini futhi ngaphezu kwakho konke, sifuna ukuthi wazi ukuthanda it. Ngakho-ke, sihlanganise uhlu lwezinto okufanele zicabangele lapho uhlela ukuqasha i-dumpster ngakho-ke isikhathi sakho sokuqala siyamangalisa.
Yini Oyifaka Ku-Dumpster
Sifuna wazi ukuthi akuyona yonke into engangena ngaphakathi kwe-dumpster. Uvunyelwe ithoni (ngokwempela, ithani) yezinto ezilapho, ezinjenge-shingles, tile kanye nokubukeka kwendawo. Kepha kukhona izinto ezikhawulelwe ezingeke zaphonswa ekuphakanyisweni komhlaba futhi sinezixazululo zokulahla lezi zinto ngokufanelekile.
Qiniseka ukweluleka umhlinzeki wakho ngalokho okufaka ku-dumpster yakho futhi bazokwazi ukukutholela idumpster efanelekile yanoma iyiphi iphrojekthi.
Lapho Ubeka I-Dumpster
Lapho uqasha i-dumpster, into okufanele icatshangwe ukuthi uma umhlaba uqinile ngokwanele ukubamba isisindo sedumpster. Awufuni ukuthi i-dumpster icindezele kunoma iyiphi indawo ethambile futhi ishiye umaka notshani lwakho obhalwe kahle.
Okunye okufanele ucabangele ukuthi ubeka endaweni yakho hhayi impahla yomakhelwane noma impahla yedolobha.
Indawo esincoma ukuthi ushiye i-dumpster yakho iyindlela yakho yokushayela imoto. Yimpahla yakho uqobo, yokhonkolo oqinile futhi yindawo elula engekho kude kakhulu nendlu ukulahla udoti wakho. Uma ukhathazekile ngokulimaza impahla, qiniseka ukuthi uthola inkampani ekhathalela impahla yakho noma enikeza uhlobo oluthile lokuvikela impahla yakho.
Uyodinga Nini I-Dumpster Futhi Uzosidinga Isikhathi Esingakanani?
Yebo, lokhu kuncike ekutheni iphrojekthi yakho iqala nini nokuthi iphrojekthi yakho izothatha isikhathi esingakanani. Uma uqala iphrojekthi yakho kusasa, khona-ke uzodinga i-dumpster yakho kusasa futhi izinkampani eziningi eziqasha ama-dumpster zingakuthola kusasa. Vele ushayele inkampani yakho yasendaweni yokulahla inkunkuma ukuze ikusize.
Ngokuya ngokuthi uzodinga isikhathi esingakanani, Uma iphrojekthi yakho izothatha isonto, uzodinga i-dumpster yesonto. Isikhathi esivamile sokuqasha i-dumpster yizinsuku ezingama-5-7 kodwa abanye abantu basidinga usuku olulodwa, futhi abanye abantu basidinga amaviki ama-3. Kuya ngempela esikhathini sephrojekthi yakho. Iningi ukuqasha i-dumpster izinkampani zifaka izinsuku ezimbalwa ngesilinganiso sazo.
Uzohamba Kanjani Uzoqeda I-Dumpster
Ngenhlanhla yakho, awukho kulokhu uwedwa. Izinkampani eziningi zokuqasha ama-dumpster zifaka phakathi konke ukukhetha nokuletha ngezinga lakho lokuqasha. Ukuze ususe i-dumpster ku-driveway yakho, konke okufanele ukwenze ukuthatha ifoni uthi, "Hawu, ungayithatha i-dumpster?" Bese kuthi emahoreni angama-24, ihambile!
Uzobe Uyiqashisela Ngubani I-Dumpster?
Ngalo lonke ucwaningo obelwenza, sinethemba lokuthi uzokhetha inkampani eqashisayo okuyiyona ehamba phambili. Sithemba ukuthi ukhetha inkampani eqasha ukuthi ayikhathaleli kuphela i-dumpster kodwa ikukhathalela, ikhasimende, futhi. Qinisekisa ukuthi ukhetha inkampani yokuqasha i-dumpster yokuhlala enobungane ngoba bazokuthatha nawe!
Posted in Home Improvement | Umake Ukuqasha i-Dumpster, Ukuqasha i-Dumpster, ukulahlwa kwemfucuza | Shiya amazwana |
Ikhasinkomba 1 of 5412345Olandelayo >Last »